घरमा बेला-बेलामा माउसुली देखिए ? हुनसक्छ यस्तो कुराको संकेत - Babal Khabar
October 17, 2021 October 17, 2021 by बबाल खबर
कहिलेकाहीँ पशुपक्षी र जीवजन्तुले भविष्यमा हुनसक्ने विभिन्न किसिमका घ’टनाका बारेमा अवगत गराइदिन्छन्।
घरमा पाइने माउसुलीले भविष्यमा हुने धेरै घ’टना बताइदिन्छन् । यो वर्णन शकुन शास्त्रमा गरेको पाइन्छ ।
जानौं माउसुली सँग जोडिएका शकुन तथा अपशकुनःनयाँ घरमा प्रवेश गर्ने समयमा गृहस्वामीले म’रेको वा माटो लागेको माउसुली देखेमा उक्त घरमा बस्ने मानिस रो’गी हुन सक्छन् । यस अपश’कुनबाट बच्नका लागि पूर्ण विधिवि धानका साथ पूजन गर्नुपर्छ।
माउसुलीले का’मक्री’डा गरेको देख्नुभयो भने कुनै पुरा’नो मित्रसँग भेट हुनसक्छ। दुई माउसुली झग’डा गरेको देख्नुभयो भने तपाईंको कसैसँग वैम’नस्य हुन सक्छ ।
दिउँसो खाना खाँदा माउसुलीको आवाज सुन्नुभयो भने छिट्टै कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ । तर यो दुर्लभ नै हुन्छ किनकि माउसुलीहरू प्रायः रातमा मात्र आवाज निकाल्छन्।
शरीरको कुन अंगमा खस्दा के फल ?
टाउको: सम्पत्ति पाइने सम्भावना, कपाल: मृ’त्युको बेला भएको संकेत दाहिने, कान: गरगहना प्राप्ति देब्रे, कान: आयु वृद्धि, नाक: भाग्योदय, मुख: मीठो भोजन, दाहिने गाला: उमेर बढ्ने
देब्रे गाला: पुरानो साथी, भेट गर्दन: यशप्राप्ति, दाह्री: ड’रलाग्दो घ’टना, जुँगा: सम्मान प्राप्त, आँखीभौं: धनहानि दाहिने, आँखा: कुनै मित्रसँग भेट, देब्रे आँखा: छिट्टै धनहानि
घाँ’टी: श’त्रुना’श, दाहिने काँध: विजय प्राप्त, देब्रे काँध: नयाँ ‘श’त्रु बन्ने, दाहिने हात: धनलाभ, देब्रे हात: सम्पत्ति ना’श दाहिने हत्केला: कपडा पाइन्छ, देब्रे हत्केला: धन ना’श, दाहिने छाती: धेरै खुशी, देब्रे छाती: घरमा क्लेश, कमरको बीचमा: आर्थिक लाभ, पिठ्युँको दाहिने भाग: सुख, पिठ्युँको देब्रे भाग: रो’ग, पिठ्युँको बीच भाग: घरमा कलह
नाभि: मनोकामना पूर्ण, दाहिने जाँघ: सुख, देब्रे जाँघः शारी’रिक पी’डा, दाहिने घुँडोः यात्रा, देब्रे घुँडोः बुद्धिनाश, दाहिने गोडोः ऐश्वर्य प्राप्त, देब्रे गोडोः बिरा’मी, दाहिने पाइ’तालोः श्री प्राप्त, देब्रे पाइतालोः व्यापार हा’नि साभार गरियको खबर । यो पनि प्रायः युवतीहरू मीठो बोल्ने केटाको कुरा छिट्टै पत्याइहाल्छन् र धोका खान पुग्छन् ।
तर अलिकति दि’माग लगाउने हो भने धो’केबाज केटाको बारेमा थाहा पाइहालिन्छ । तल लेखिएका कुरा पढेर तपाईं धो’कामा पर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।
प्रायः केटाहरूले युवतीलाई भेट्नेबित्तिकै आफ्नोपन देखाउँदै मीठोमीठो कुरा गर्न थालिहाल्छन् ।कति राम्री भन्दै तारिफ गर्न थालिहाल्छन् । अनि युवतीलाई कस्तो राम्रो केटो रहेछ भन्ने लाग्छ । तर वास्तवमा ऊ राम्रो मान्छे नहुनसक्छ ।
फ्लर्ट गर्न माहिर र धोकबाज च’रित्र भएका युवकहरू मीठो बोल्न माहिर हुन्छन् । मीठो कुरामा फस्ल्याङफुस्लुङ पारेर युवतीलाई पट्ट्याउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ ।
धेरै पुरुषको मान्यता के हुन्छ भने महिलासँग नजिक हुने भनेकै शा’रीरिक स’म्बन्ध बनाउनका लागि हो । अनि यस्ता पुरुषले महिलासँग से’क्स सम्बन्धी कुरा गर्न खोज्छन् । गल’त नियत भएका पुरुषको ‘रहस्यमयी व्यक्तित्व हुन्छ ।
यस्ता मान्छे मोबाइलमा झुण्डिएर बसेका देखिन्छन् तर उनीहरूको इनबक्स हेर्नुभयो भने प्रायः खाली नै हुन्छ ।
धो’का दिने प्रवृत्ति भएको मान्छे आफ्ना सबै कुरा लुकाएर राख्न चाहन्छन् । कुनै पुरुषले ज्यादै फ्लर्ट गर्न थाल्यो भने महिलाहरू सावधान भइहाल्नुपर्छ । त्यस्तो मान्छेले तपाईंसँग मीठो कुरा त गर्छ तर तपाईंले भविष्यको कुरा झिक्नुभयो, जिम्मेवारीको कुरा झिक्नुभयो भने टार्न खोज्छ वा भाग्छ ।
यस्तो व्यवहार देखायो भने त्यो मान्छेबाट टाढै रहनु ठीक हुन्छ । तपाईंसँग सम्बन्धित कुरामा लापरवाही देखाउने, तपाईंका महत्वपूर्ण दिनहरू, जस्तै जन्मदिन, बिर्सने अनि जे पायो त्यही बहाना बनाउने मान्छे पनि धोकेबाज हुन्छन् । यस्तालाई भरोसा गर्नु ख’तरनाक हुन्छ ।
यो खबर साभार गरियको हो । यस्तै यो पनि राम्रो स्वभाव भएका स्त्री भयो भने पतिको जीवन एकदम राम्रो हुन्छ ।
अनि त्यसै गरी राम्रो स्वभाव भएको पति भयो भने पनि स्त्रीको जीवन स्वर्गीय हुन्छ । तर यी दुई जना म’ध्ये एक जना नराम्रो भयो भने दुवैको जीवन नर्क समान हुन्छ ।
कतिपय मानिसहरूको स्व’भाव यस्तो हुन्छ, जसले एक अर्काको जीवन नर्क बनाउँछ ।हामीले महिलाहरूमा पाइने ५ नराम्रा स्वभावबारे जानकारी गराउँदै छौँ, त्यसो त पुरुषहरू चाही सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने होइनन् ।
पु’रुषका कारण पनि स’म्बन्धमा धेरै समस्या आउन सक्छन् । यहाँ स्त्रीहरूको ५ स्वभावको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
१. पतिलाई आफ्नो मात्रै ठान्ने-पति आफ्नो मात्रै हो वा उसको अरूसँग कुनै स’म्बन्ध छैन भन्ने महिलाले हरेक पु’रुषको जीवनलाई सङ्कटमा पारिरहेका हुन्छन् । यस प्रकारको स्वार्थी सोच राख्ने महिलाले पुरुषको सार्वजनिक जीवन ध्व’स्त पारिदिन्छन् । फलस्वरुपः हरेक पु’रुष आफ्ना बाबु आमा, इष्टमित्र, साथीभाइ तथा सहकर्मीबाट टाढा हुन बाध्य हुन्छन् ।
२. नमिठो वचन बोल्ने-वचनको वाण निकै घा तक हुने गर्दछ । चर्को र कर्कश स्वरले स’म्बन्धमा दरार पैदा गर्न भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । जीवनका हरेक पलहरू निकै आ घातपूर्ण हुने गर्दछन् ।
तर यसको ठिक विपरीत, मीठो र भद्र वचन बोल्ने महिला जीवनसाथी बनेमा एउटा पु’रुषको जीवन अमृतमय बन्छ ।३. मनि माइन्डेड अर्थात् पैसालाई मात्र महत्त्व दिने-आफ्नो श्रीमानले सधैँ पैसा मात्रै कमाओस् भन्ने सोच भएका महिलाहरूले हरेक पु’रुषलाई पैसा कमाउने मेशिनबाहेक अरू केही ठान्दैनन् ।
दाम्पत्य जीवनमा पैसाले प्रेम, स’मर्पण र बफादारिताको ठाउँ लिएपछि आत्मीयता भन्ने कुरा हराउँछ। पैसाप्रति मात्रै आशक्ति राख्ने आफ्नो पतिको मात्रै होइन आफ्नै जीवन पनि निकै निरस बनाउँछन् ।
४.कचकचे र रुन्चे-सामान्य कुरामा पनि किचकिच गर्ने र रुन्चे स्वभावका महिलाले पनि पु’रुषको जीवनलाई नराम्रो असर पारिरहेका हुन्छन् । दिनहुँको गनगन कचकच र गुनासोले पु’रुषको मनोबल गिर्दै जान्छ । यस प्रकारको स्वभाव भएका महिलाले पु’रुषलाई हौसला दिनुको साटो उसको जीवनलाई निराश र कु ण्ठाग्र स्त बनाउँछन् ।
५. हस्तक्षे’पकारी स्वभाव-कुनै-कुनै महिलाले पु’रुषले गरेका हरेक काममा ह’स्तक्षेप गर्न मन पराउँछन् । यसरी हस्तक्षेप गर्दा आफूले जितेको महसुस गर्दछन् ।
Prevयस्तो बानी भएका केटाहरु हुन्छन धोखेबाज !
nextयी ७ चिज मागेर कहिले प्रयोग नगर्नुहोस् नत्र ‘अनिष्ट’ हुन्छ!!